ယူကေနာမည်ကြီး သတင်းစာ ဂါးဒီးယန်းမှာ ဇာဂနာ ပြော “မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာလူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုကို တွန်းတင်ပေးနေပါလား” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The lentil storehouses, owned by Burmese Muslims, had been set fire
Zarganar @ guardian.uk,”Burmese people are using their new freedom to express views which incite racial hatred” »
“အင်တာနက်ကလေး သုံးမိလို့လည်း ထောင်နန်းစံရဖူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက နည်းပညာကို နည်းနည်းကလေးလောက်ပဲသိတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးကြသူတွေက ဒီလို (အင်တာနက်နဲ့)အဆက် အသွယ် လုပ်တာတွေကို ထိန်း ချုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ရဲတွေက လူရွှင်တော်တစ်ယောက်ကို ပျက်လုံးထုတ်ပြမယ် လို့တော့ ကျွန်တော်မထင်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ၊ အဲဒီရဲတွေက ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ကို သိမ်းသွားပြီး Hard Disk ကိုကျ မသိမ်းဘဲထားခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်စွာဖြော်ပပိုင်ခွင့်ကို အချိန်တော်တော်ကြာကြာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာသစ်မှာတော့ မြန်မာက လုံးဝကို ပြောင်းလဲနေပါပြီ။ အဲဒီလိုပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုလည်း တွေ့နေရပါပြီ။”
This entry was posted on June 20, 2012 at 4:52 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.